Wasiir Axmad Ciise Cawad oo dhawaan shaqada laga ceyrin doono!
Home Wararka Wasiir Axmad Ciise Cawad oo dhawaan shaqada laga ceyrin doono!
Warar lagu kalsoon yahay oo ay Muqadisho Online ka heshay xafiisyada Xasan Kheyre iyo Farmaajo ayaa xaqiijiyay in maalmaha soo socda shaqada laga ceyrin doono Wasiirka Arimaha Dibadda Axmad Ciise Cawad.
Qorshaha shaqa ka fariisinta Axmad Ciise Cawad oo in mudo ah soo socotay ayaa waxa hada go’aan Wadajir ah ka qaatay Xasan Kheyre (oo markiisii hore cadaawad qaasa u qabay Wasiir Cawad ) iyo Farmaajo oo lagu qanciyay in uu ka taqaluso Cawad. Xasan Kheyre ayaa ku yiri saaxiibadiisa kula jira golaha wasiiraada“…,mudo ayaa ay nagu qaadatay in ninkaan laga horwareejiyo wasaarada laakiin hoowshiisa waa soo dhamaatay hadda”
Waxa aan wali la isku afgaran cida lagu badalayo Wasiirka Cawad laakiin Wararka qaar ayaa sheegaya in Wasiirka cusub laga keeni doono beesha Digil iyo Mirrifle iyada oo loo magacaabayo qof saaxiib dhaw la ah Farmaajo.
Wasiir Cawad ayaa u sheegay beesha Ciise Maxamuud ee uu ka dhasahay in shaqada laga ceyrin doono mar aan saa u sii dheeraynin. Waxa uu ka codsaday beesha in ay kala hadlaan Farmaajo. Laakiin beeshiisa ayaa u sheegtay in ayan wax saameeyn ah ku lahaynin Farmaajo kooxda isaga haysataba.
Dhanka kale Xildhibaan Cali Hoosh oo ay isku beel ka soo jeedaan Wasiir Cawad isla markaana ay saaxiibo house wada yihiin Xasan Kheyre ayaa rajo badan kaga jirtaa in isaga laga dhigo wasiir si taasi u timaadana waa in Cawad meesha ka baxaa!
Wasiir Cawad oo og in waqtiga uu sii joogayo wasiiraada ay kooban tahay ayaa maalmhana danbe waxa uu ku jiray safo macno daro ah uu lacag uu ku qaadanayay. Safarkastaa ee u safro ayuu ku qataa sahay gaaraysaa $23,000 oo doolar. Labdii bilood ee la soo dhaafay asbuuc kastaa waxa uu ku jiray safar aan dan Soomaali ah ku jirin.
Sida looga bartay Farmaajo, marka go’aan uu horay u gaaray uu ka arko warbaahinta waa uu ka noqdaa go’aankaas? hadaba ma laga yabaa in uu Farmaajo ka noqdo go’aanka ceyrinta Axmad Ciise Cawad mise waa ku adkeeysan doonaa go’aankiisa?
Previous articleDhagxaan cusub oo lagu gooyay wadooyin soo gala magaalada Muqdisho
Next articleGud. Baarlamaanka oo magacaabay gudiga soo diyaarinta Sh. Doorashooyinka